Naya Post Nepal | ओमिक्रोन सं’क्रमित बढेपछि उडानमा नयाँ व्यवस्था, के छ व्यवस्था ? एयरपोर्टबाट फर्किनु पर्ला
ओमिक्रोन सं’क्रमित बढेपछि उडानमा नयाँ व्यवस्था, के छ व्यवस्था ? एयरपोर्टबाट फर्किनु पर्ला
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको विमानबाट काठमाडौंदेखि भारतको नयाँ दिल्लीतर्फ जाने हवाई यात्रुले अब अनिवार्य एयर सुविधा फारम भर्नुपर्ने भएको छ ।
हालसम्म भारतका २१ वटा राज्यमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिएको छ । ओमिक्रोनका संक्रमितमध्ये सबैभन्दा धेरै महाराष्ट्र र दिल्लीमा रहेका छन् । महाराष्ट्रमा मंगलबारसम्म १ सय ६७ जना र दिल्लीमा १ सय ६५ जनामा यो भेरियन्टको सं’क्र’मण पुष्टि भएको त्यहाँको सरकारले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट
२०७८ पुष १७, शनिबार प्रकाशित 1 Minute 259 Views